Inkantolo ibe ngumalamulela kolwamabhange – Bayede News
Inkantolo ibe ngumalamulela kolwamabhange
Kusuka enhlokodolobha yezomnotho yaseNingizimu Afrika iJohannesburg
Posted on 26 September 2019 2 October 2019 by Bayede-News
Kusuka enhlokodolobha yezomnotho yaseNingizimu Afrika iJohannesburg kuya eLondon naseNew York bekukhona ukuhhumuzela mayelana nesinqumo esithathwe yizisebenzi zaseNingizimu Afrika ezisebenza emabhange. Ngokwezinhlelo zenyunyana iSouth African Society of Banking Officials (SASBO) enamalungu ayizi-50 000 bekuhlelelwe isiteleka sanamuhla (ngoLwesihlanu) nobekungangabazisi ukuthi besizoba nomthelela ongemuhle kuleli. Bekuzokwenzeka konke lokhu nje izwe lilinde ukuba kuphume eminye imiphumela ngokwethembeka kwalo kwezezimali njengoba kumincelwe ukuba lingaguqi lize lifike esigabeni sikavobe.
Ulaka lwezisebenzi ludalwa yizigameko zakamuva lapho abaqashi (amabhange) bediliza khona izisebenzi. NgoNdasa nonyaka iStandard Bank yamemezela inhloso yokuvala amagatsha angama-91 okusho ukulahleka kwemisebenzi eyi-1 200. IStandard Bank ihlela ukudiliza izisebenzi eziyizi-6 000, kanti iNedbank yona izodiliza eziyizi- 3 000, kuthi i-ABSA idilize ezingama-878.
Ephawula ngesinqumo sokudiliza izisebenzi okhulumela amabhange uMnu uCas Coovadia uthe; “Ukuncishiswa kwezisebenzi kwenzeka emabhange amaningi emhlabeni wonke. Ngenxa yoguquko emhlabeni, abaningi embonini yezamabhange baphoqeleka ukubuyekeza isakhiwo samabhizinisi abo ukuqinisekisa ukuthi bahlale behambisana nezidingo zabasebenzisimabhange. Amabhange akuleli nawo kufanele alawule umthelela womthamo osezingeni eliphansi webhizinisi ngenxa yesimo somnotho, okubonakala uzolokhu untenga esikhathini esizayo.”
Kuthe lapho izwe lonke selimincele okungahle kwenzeke iNkantolo Yezabasebenzi yangenelela ngesikhathi ikhipha isivimbelo sesiteleka esikhulukazi kusuka ngowe-1920. UMehluleli uHilary Rabkin-Naicker wethembise ukubuye aziveze izizathu zokuvumela isicelo sesivimbelo nebesifakwe wuhlaka losomabhizinisi bakuleli iBusiness Unity South Africa (BUSA). Yize lesi kuyisinqumo senkantolo, kukhona ukukhuluma okuthi kulokhu inkantolo ibe nemizwa njengoba ukuba isiteleka lesi besiqhubekile uHulumeni ubezongena ehlazweni nasotakwini kanjalo nesithunzi samabhange akuleli sithikamezeke nomnotho.
Okwenzeka emabhange kubukeka kuyisiqalo sokukhulu okuzayo lapho izinkampani zizodiliza kuze kudingeke kungenelele nezinkantolo. Isimemezelo seSibanye Gold sokudiliza izisebenzi zasemayini eziyizi-5270 eMarikana naso sibhekwe ngabovu njengoba leya kuyindawo ezwelayo uma kuke kwathi phazi.
Ibhangegodla laseNingizimu Afrika lihlonza ukukhula komnotho ngama-0.6% kulo nyaka nangama-2% kuze kuyoshaya owe-2021.
Posted on 24 June 2019 27 June 2019